High Blood Pressure Treatment: उच्च रक्तचाप कसरी भई रहेको छ ? र कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? - Nepali Health Media
ब्लड प्रेसर (रक्तचाप ) को समस्या हिजो आज हर कोहिमा हुने गरेको पाइन्छ। नेपाल मात्र होइन विश्व को जुनै कुनामा गए पनि प्रेसरको समस्या भएको कुरा काहीं न काहीं सुनी रहेको हुन्छौं। किन दिनानु दिन यसरी विश्व को प्राय हरेक मानिस मा यति धेरै प्रेसर को समस्या आइ रहेको छ ?
आउनुहोस जानौं प्रेसर को समस्या कसरी आई रहेको छ र यसलाई कन्ट्रोल गर्न हामीले कस्ता उपायहरु अपनाउन जरुरी हुन्छ ? भन्ने बारे बुझौं।
सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा :
ब्लड प्रेसरमा समस्या आउने मुख्य कारण हामीले खाने खाना नै हो। हामीले दैनिक जीवन मा जस्तो खाना खाइ रहेको छौँ, ठिक त्यस्तै नतिजा हामीले भोगी रहेको छौं। यो रोग कुनैं भगवानको दोष होइन , कुनै ठाउँ बाट उडेर आएको अलौकिक समस्या होइन ।
यो त हामीले जस्तो जीवन शैली बिताईरहेको छौँ , जस्तो खाना खाइ रहेको छौं त्यहि अनुसार को नतिजा नै हामिले पाईरहेको छौं।
हाम्रो खाने बानी नै त्यस्तै छ कि हामी शरीर को लागि के उपयुक्त छ ? कति उपयुक्त छ? भन्ने कुरा लाई ख्याल नै नगरी, कुन मिठो र नमिठो ? भन्ने तिर बढी फोकस गरेर खाने गर्दछौं। एक दिन बजार गइयो भने बजार मा सजाएर राखेको कुन मिठो छ ? भन्दै छानी-छानी किनेर खान्छौं तर ति खानेकुरा मिठो बनाउन के के प्रयोग गरिएको थियो होला ? शरीर को लागि उपयुक्त छ छैन ? भन्ने कुरामा ध्यान दिने हाम्रो बानी छैन।
हाम्रो यस्तो चलन र जीवन शैली आज मात्र होइन हाम्रो पुर्खाहरुबाट नै चलि आएको छ। जसले आज बंश को आधार मा पनि प्रेसर को समस्या आउने गरेको पाइन्छ र हामीले यसरी प्रेसरको समस्या भोगी रहदा हामी बाट जन्मिने सन्तान मा पनि यो समस्या बंशाणु गत गुण मार्फत सरेर जान सक्छ। यति बेला विश्व मा सानै उमेर का मानिस मा पनि प्रेसर को समस्या आउने गरेको छ। जसमा के हि प्रतिशत बंसको कारण पनि रहेको छ।
सम्बन्धित पोस्टहरु :
खैर जे जसरी भए पनि.…
हामीले प्रेसर कन्ट्रोल गर्न को निमित्त सर्वप्रथम हाम्रो दैनिक जीवन शैली देखि खाने कुरा मा ध्यान दिन / परिवर्तन गर्न जरुरी छ । ब्लड प्रेसर हाइ भएकाहरुलाई प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने के हि तरिका यहाँ तल दिईएको छ।
शारीरिक तौल कम गर्ने : प्रेसर हाई हुनुको एक मुख्य कारण शरीर को तौल को मात्र पनि बढ्नु हो। खानामा आएको समस्या र ब्यायाम को कमि हुँदा शरीर को तौल बढ्ने गर्दछ। शरीर मा तौल बढी हुँदा ब्लड प्रेसर बढ्दछ । त्यसैले प्रेसर कन्ट्रोल गर्न को निमित्त शरीर को तौल कम गर्न र खानामा सुधार गर्न जरुरी हुन्छ।
नुन कम खाने बनी गर्ने : नुन कम खाने बानी गर्न सुरु गरे ब्लड प्रेसर मा पनि कन्ट्रोल आउँन सुरु हुदछ। हामीले दैनिक खाने खानामा हरेक दिन के हि मात्रामा नुन को मात्रा घटाउने गर्दा यसले लामो समय सम्म प्रेसर लाइ कन्ट्रोल गर्दछ। ब्लड मा नुन को मात्रा कम हुन सुरु भए पछि प्रेसर को मात्रा आफै घटदै जान सुरु हुदछ।
शरीरमा पोटासियम को मात्रा बढाउने : प्रेसर को समस्या भएकाहरुले शरीर मा पोटासियम को मात्र बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । हरेक दिन ८ देखि १० वटा फलफुल र हरियो खाने कुरा मा जोड दिएर पनि पोटासियम को मात्रा बढाउँन सकिन्छ । पोटासियम ले ब्लड मा प्रेसर बढ्नबाट कम गराउदछ र ब्लड प्रेसर घटाउँदछ। तर पोटासियम को मात्रा बढाउनु अघि एक पटक निश्चित गर्न जरुरी छ कि मृगौला र मुटुको कुनै रोग छ वा छैन ? किनकि शरीर मा पोटासियम बढी छ र मृगौला ले फिल्टर गर्न सकेको छैन भने पुन ब्लड मा पोटासियम को मात्र बढ्दै जाँदा यसले मृगौला ड्यामेज गर्न सक्दछ ।
अल्कोहल बिल्कुल नपिउने / कम पिउने : अल्कोहल ले प्रेसर बढाउने गर्दछ। यदि प्रेसर हाई छ भने प्रेसर घटाउन अल्कोहल भरसक सेवन नगर्ने वा गरे पनि कम गर्ने गर्नु पर्दछ। अल्कोहल पिउनेहरुमा प्राय अल्कोहल नपिउनेहरुको तुलना मा ब्लड प्रेसर को असर बढी देखिने गर्दछ।
शारीरिक ब्यायाम गर्ने: शारीरिक व्यायाम ले ब्लड प्रेसर मात्र होइन शरीर को अन्य समस्याहरुलाई पनि निर्मुल पार्दछ। विशेष गरी शारीरक व्यायाम गर्ने हरुमा हार्ट अट्ट्याक हुने , स्ट्रोक हुने, ब्लड प्रेसर बढ्ने वा प्रेसर घट्ने, मधुमेह हुने, जस्ता विभिनन्न सम्भावित घटना र समस्या आउँन बाट अन्त्य गर्दछ। समय ले भ्याए सम्म भरसक दैनिक कम्तिमा ३० मिनेट देखि १ घण्टा व्यायाम गरे शरीर को रक्तचाप लाई तुरन्त कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ।
तनाव कम गर्ने: तनाव ले मानिसको ब्लड प्रेसर बढाउने गर्दछ। तनाव लिने गर्दा यसले नकारात्मक व्यवहार गर्न तिर हामीलाई दिमाग ले अर्डर गर्दछ यो बेला ब्लड प्रेसर झन् बढ्ने, हार्ट अट्ट्याक हुने, स्ट्रोक हुने सम्भवना र जोखिम बढ्दछ। तर जतिबेलै बिन्दास मा बस्ने गर्दा दिमाग पनि फ्रेश हुने र ब्लडमा पनि प्रेसर बढ्न पाउंदैन।
चुरोट सेवन नगर्ने : धुम्रपान ले Atherosclerosis बनाउँदछ। Atherosclerosis मतलब हो मुटुको रक्त धमनीमा संकुचित ल्याउनु मतलब मुटु को रक्त धमनी मा भित्र पट्टी फोहोर वा फ्याट् जमी रगतको बाटो अवरोध गरी रक्त संचार मा अवरोध आउनु। रक्तधमनीमा संकुचन आउँदा हर्ट अट्याक हुने, स्ट्रोक हुने, ,प्रेसर बढ्ने जस्ता समस्या आउने गर्दछ। त्यसैले धुम्रपान सेवन गर्न छोड्नु को सुरुवाती पल मात्रै पनि प्रेसर मात्र कम गराउन होइन हार्ट अट्याक , स्ट्रोक,र अन्य विभिन्न मुटु सम्बन्धि, मृगौला सम्बन्धि समस्या आदि विभिन्न रोग बाट बच्न गरिएको एक सुरुवाती चरण हुनेछ।
यी माथि बताइएको जानकारीहरु मन परे सेयर गर्नुहोस र सबैलाई ज्ञान को ज्योति छर्न सहयोग गर्नुहोस।
Tags: #health #nepal #nepalihealth blood pressure Blood Pressure High health magazine health news health site health tips hipotenson hypartenson hypertension hypertension meaning in nepali hypotensan in nepali nepali Nepali Health tips treatment for high blood pressure उक्त रक्तचाप उच्च रक्तचाप कसरी घटाउने के हो उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेसर ब्लड प्रेसर उपचार ब्लड प्रेसरका लक्षण र उपचार रक्तचाप रक्तचाप कम भए के गर्ने लक्षण र उपचार
Next जाडो मा पिसाव बढी लाग्ने र गर्मि मा पसिना आउने किन हुन्छ ?
1 thought on “High Blood Pressure Treatment: उच्च रक्तचाप कसरी भई रहेको छ ? र कसरी कन्ट्रोल गर्ने ?”
Pingback: खरबुजा खाँदा शरीरमा के के फाइदा हुन्छ? Watermelon Benefits In Nepali, Fruits & Vegetables